पित्तथैलीको पत्थरीको उपचारका क्रममा मृत्यु, रकम मिनाहा गर्ने सहमति ! – Idea Khabar
पित्तथैलीको पत्थरीको उपचारका क्रममा मृत्यु, रकम मिनाहा गर्ने सहमति !
आइडिया खबर२०७६ असार २, सोमबार ०९:०९
काठमाडौं, चार दिनअघि ओम अस्पतालमा पित्तथैलीको पत्थरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको सहमतिपछि शव उठाइएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ । आइतबार पीडित पक्षलाई अस्पतालको तर्फबाट मृतकप्रति समवेदना प्रकट गर्दै अस्पताललाई तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्ने सहमति भएको ओम अस्पतालले जनाएको छ । उक्त सहमतिपछि आफन्तले रामप्यारी थापाको शव बुझेका छन् ।
अस्पतालका प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्की, मृतकका आफन्त मोहन थापा तथा गौशाला प्रहरीको रोहबरमा बसी प्रहरी कार्यालयमा वार्ता भएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती–१० की ५० वर्षीया रामप्यारी थापाको ओम अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको थियो ।
पीडित पक्षले अस्पताल परिसरमा ४ दिनदेखि धर्ना दिँदा अरु बिरामीलाई समेत असर परेको भन्दै आइतबार प्रहरीले अस्पतालबाट लाश उठाएपछि धर्नामा बस्नेहरु तितरबितर भएका र वडा कार्यालयले वार्ता अस्पतालमा हैन प्रहरी प्रशासनमा गर्नुस् भनेर दुवै पक्षलाई सहजीकरण गरेका कारण वार्ता सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
वार्ता टुंगिएलगत्तै रामप्यारीको हिन्दु परम्पराअनुसार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको रामप्यारीका बैनी ज्वाइँ खड्ग श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । दैनिक धर्नाका विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएपछि सहमतिमा पुगेको बुझिएको छ ।
२०७६ असार २९, आईतवार ०७:३०
६ बुँदे मागसहित डा.गोविन्द केसीद्वारा आमरण अनशन शुरु
२०७६ कार्तिक १८, सोमबार १५:२१
घोच्ने आतङ्क : धनुषामा विद्यालय हिँडेका शिक्षकमाथि सिरिञ्ज आक्रमण भएको आश‌ंका
२०७६ असार २०, शुक्रबार ०७:५६
महरा प्रकरणको पर्दाफास गर्ने पत्रकारलाई रोशनि शाहीको चेतावनी (विज्ञप्ति सहित)
२०७६ आश्विन २५, शनिबार ०६:२१
२०७६ असार १, आईतवार ०९:४२